Ramadan, Aniga, iyo Sambuus – Ali Halane
Sambuusku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka fudud ee caanka ka ah magaalooyinka Soomaalida. Bisha Ramadaanka dad aad u badan oo awooda dhaqaale ahaan ayaa jecel in ay ku afuraan.
Maaddama aanan ku fiicneyn cunto karinta, war uma heynin howsha iyo dhibka laga maro diyaarinta sambuuska. Waxaanse ku baraarugay arrintaa dhowr sano ka hor, taas ayaana igu dhalisay in aan joojiyo in aan ku afuro sambuuska ama gurigeyga lagu sammeeyo bisha Ramadaan iyo bilaha kaleba.
Sababta aan u joojiyay
Waxaa igu qasbay inaan joojiyo in anigoo ka shaqeynayay magaalada Muqdisho ay waddadii aan shaqada u mari jiray ay xirantay maalin maalmaha ka mid ah, Muddo ayaan sugay bal inaan xeeladeysan karo oo aan waddo kale ka soo wareegi karo. Laakiin wey igu adkaatay, waxaana ku qaasbanaaday in aan guriga iska joogo maalintaas.
Subaxdaas waxaa guriga ka socotay howsha sambuus sameyska, oo ay ku jireen xaaskeyga iyo gabdho walaalahey ah oo guriga nagula noolaa. Intaan la fariistay ayaan ku iri, maanta sambuuska ayaan idinla sameynayaa ee gambar ii keena. Waxaa la ii dhiibay howshii lagu fidinaayay foolyada oo aan khibrad saas u weyn u baahneyn
Maalintaas waxaan goobjoog u ahaa howsha sambuus sameynta min billow ilaa dhammaad; qasida burka, rifaaqiddiisa, foolyada sambuuska fidinteeda, jarjariddeda, iyo isku laabiddeeda, ka bacdina shiididda hilibka iyo qudaarta lagu dhex shubayo sambuuska.
Burjikooyinka ayaan wax ka shiday, foolyada ayaan wax ka laallaabay iyo waliba buuxinteeda iyo isku dhedhejinteeda. Markii dhowrkii xabbo ee ugu horreeyay jaga-gacdooda ay yeertay ayaan guriga ka baxay oo aan xaafadda walaashey iga yar soo aaday, si aan usoo salaamo.
Sidoo kale, guriga walaashey waxaa ka socotay howl sambuus dubid ah oo intii aan soo arkay la maraayo.
Galab-gaabkii ayaan guriga kusoo laabtay, iyadoo sambuuskii dubiddiisa ay dhammaatay, oo isagoo midabka dahabka oo kale leh saxamo lagu shubay, oo u diyaarsan in lagu afuro.
Waxaan xisaabiyay inta saacadood ee ay qaadatay sameynta sambuuskaas oo aan ka yareyn 7 saacadood. Aakhirkiina kusoo dhamaaday bur la dhex galiyay hilib iyo qudaar.
Markii aan afurnay ayaan isugu yeeray xaaskeyga iyo gabdhihii kale. Waxaan kala sheekeystay dhibka laga maro sambuuska ee aan maanta arkay, ayaguna ay maalin walba kujiraan, farahana uga gubtaan. Waxaan u cuskaday in sambuus si kasta ha u macaanaadee uusan istaahilin in waqtigaa iyo daalka intaas la eg lagu bixiyo oo intaas oo fara-murux ah loo maro.
Waxaan ku iri: ka warrama haddii sambuus aan iska dhaafno sidiisaba, oo dhibkiisa ay ka nastaan. Dood dheer ka dib waxaan isku waafaqnay in caawa ay ugu dambeyso in gurigaan sambuus laga dubo.
Markii ay gabdhihii aad iila doodeen waxaan ku iri “Aniga sambuus idiinma diidaayo, laakiin aniga kuma jiro, haddaad adinka rabtaan khiyaarkiin, laakiin yaan la isoo hor dhigin caawa ka dib. Habeenkaas ayaan aniga iyo sambuus afurkiisa aan is macasalaameynay, gabdhahana waxaan uga cudur daartay dhibkii horey ugu gaaray sammeyntiisa.
Hadda reerkeygu wey ka nasteen sambuus howshiisa, intii dhowr sano ah. Markii ay carruurteydu ‘yiraahdaan ama dhahaan sambuus baan rabnaa’, waxaan ku iraahdaa ‘laamiga ka soo gata’.
Dhacdada sheekadan oo aan iyadoo kooban la wadaagay asxaabteyda Facebook, waxay ku noqotay lama filaan, muddo ka dibna qaar badan oo ka mid ayaa qaatay go’aan la mid keyga, waxeyna noqotay sheeko qosol iyo xannun labadaba leh oo la is dhaafsado.
Ka sokow sambuuska, waxaaba jirta in ragga soomaalida badankoodu aysan ka warqabin wax ka socda jikada dhexdeeda, oo gabdhaha keliya loo daayay, oo ay la aamusan yihiin daal iyo rafaad. Waana arrin u baahan in dood laga furo mujtamaca dhexdiisa.
Waxaan soo xusuusatay oraah ay tiri gabadha qoraaga ah ee reer Nigeria oo lagu magacaabo Chimamanda Ngozi Adichie oo ahayd: “Aqoonta cunto-karintu ma ahan wax ay gabdhuhu caloosha hooyadood kaga soo bexeen oo dheddignimda ku laran”.
Inta sambuuska jecel ee guryahooda laga sameeyo waxaan kula talinayaa in ay hal mar ka qeyb qaataan sameyntiisa, ka bacdina ay ka talo bixiyaan haddii sambuus istaahilo intaas oo dhib iyo howl ah.
FG: maqaalkan waxaa lagu daabacay www.bbcsomali.com taariikdu markay ahayd 8 May, 2020
السابق عن عيد ميلادي “الافتراضي” (الحلقة الثانية)
التالي Jikada iyo Ragga Soomaalida: Maxaa qasbaya in gabadhaha lagu kaliyeelo howsha jikada?